Shacabka Ku nool deegaanada Jubbooyinka oo Go’doon ugu jira dagaalo joogto noqday iyo daadadka roobka. – Hornafrik Media Network
Shacabka Ku nool deegaanada Jubbooyinka oo Go’doon ugu jira dagaalo joogto noqday iyo daadadka roobka.
Hornafrik-Dadka shacabka ah ee ku nool deenaanada iyo degmooyinka Gobolada Jubada dhexe iyo Jubada Hoose ayaa mudooyinkaan danbe waxaa ay go’doon ugu jiraan dagaalo jogto ka noqdaydeegano kamid ah jubooyinka oo u dhaxeya Al-shabaab iyo Ciidamada dowlada oo taagero helay , iyo sidoo kale fatahaadaha wabiga Jubada.
Jubada dhexe ayaa deganada ay ka koobantahay waxaa ay dadku kula ildaranyihiin saameyn ay ku reebtay abaro dhacay dhawaan iyo fatahaada wabija Jubba sida uu ino sheegay Crashiid macalin Gaas oo kamid ah dadka ku dhaqan Jubooyinka.
Jubadaha hoose dadka ku nool gaar ahaan deegaanada waqooyiga ka xiga Kismayo ayaa la kulma dagaalka jogtada ah iyo duqeymaha diyaaradeed eel ala radsado Al-shabaab , dadkaasi badai waa beeraley waxaana ku adaga in ay dalaba ka soo baxa beeraha u suuq geystaan magaalada Kismaayo waayo mar shabaab ayaan u ogoleyn in ay Kismayo tagaan marna dagaalad in ay la kulmaan ayay ka baqaan.
Crashiid aya sidoo kale sheegay in dadka ay qaar barakacen qaarna go’doon yihiin.
Waxaa ay shacabka Jubooyinka marka aan la xerrirno sheegaan in ay qabaan dhobaatooyin badan oo ay u muuqato in ay san dowlada ka war qabin waxayna u sbabeynayaan wax u qabsho la ;aanta.
Sidoo kale qaar ayaa jira oo maamulka Jubbaland ku eedeyay in ay lunsadeen lacag deeq ah oo loogu talo galay dadka ay fatahada ku samaeeyen deeganaada Jubaland.
Laamaha amaanka ee dalalka Kenya iyo Uganda oo sheegay in ay jirto cabsi laga qabo Al-shabaab inta lagu guda jiro maalmaha Ciida.
Ku dhawaad 10 ruux oo ku dhintay wabiga Shabeele ee g.Sh/Hoose.